စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာ VKONTAKTE ဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - VKONTAKTE - 2019
နေ့စွဲဖို့, တုတ်လူကြိုက်အများဆုံးပြင်ပသိုလှောင်မှုမီဒီယာဖြစ်ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ (အသီးသီး CD / DVD ကိုနှင့် hard drive တွေ,), optical နှင့်သံလိုက် disk တွေ, flash drive ကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ နှင့်ဖြင့် Compact နှင့်တည်ငြိမ်ရေးအောင်မြင်ခဲ့ပြီနည်း ရဲ့နားလည်ပါစေ!
အဘယ်အရာကိုကပါဝင်သည်နှင့်မည်သို့ flash drive ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်
flash ကို-drive ကိုတစ်ဦးကျဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်အားဖြင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်သည့်ရွေ့လျားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများမရှိအတူ - မှတ်သားရန်ပထမဦးဆုံးအရာ။ ဒါကဒီဇိုင်းအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် - တဲ့အကာအကွယ်ထည် flash drive ကိုမပါဘဲကို USB-connector ကိုမှရှိတာပါသောပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ကြရအောင်။
အများဆုံး flash drive ကို၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
USB မှတ်-connector ကို
အဆိုပါ drive ကို Nande-မှတ်ဉာဏ်မှတဆင့်ပြေး: ဆီမီးကွန်ဒတ်တာချစ်ပ်။ chips ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်, ဦးစွာအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်း, ဒုတိယအ - အလွန် capacious: ပထမဦးဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရ flash ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌မှာယခုကပင် Blu-ray discs တွေကိုများ၏စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်သောအချိန် optical discs တွေကိုမှာဓလေ့ထုံးတမ်းမောင်းလျှင်။ ဤသည်မှတ်ဉာဏ်, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အကအလားတူနည်းပညာအပေါ် created မှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်, မတူဘဲတစ်ပါဝါအရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါဘူးသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်လည်း Non-မတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်နန္ဒမှတ်ဉာဏ်မှတ်ဉာဏ် devices တွေကိုတခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက်တဦးတည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ဤအချစ်ပ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုရေးသံသရာတစ်အချို့နံပါတ် (ခြေလှမ်းများ၏ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ / Write ဒေတာကိုဖတ်) ကိုကန့်သတ်သောတကယ်တော့။ (မှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ) အသက် 30 000 နှင့်ညီမျှဖတ်ပါ-ရေးသံသရာ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အများကြီးကြောင်းကိုပုံရသည်, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်.5နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်သို့သော်တစ်ဦးကို flash card ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သာဒေတာတွေကိုဖတ်ပါရန်။ ထို့အပြင်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝရန်, Nande-မှတ်ဉာဏ်ပါဝါအတက်အကျနှင့် electrostatic ရိနာစွဲရန်အလွန်အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ကနေကွာစောင့်ရှောက်လော့။
အဆိုပါ flash မှတ်ဉာဏ်နှင့်ချိတ်ဆက် devices များ (စတာတွေကို PC, တီဗီ, ရေဒီယို,) တို့အကြား controller ကိုဆက်သွယ်ရေး tool ကို - ဆောင်းပါး၏အစအဦးမှာကိန်းဂဏန်းအတွက်အရေအတွက်ကို2မှာအလွန်သေးငယ်သော chip ကိုဖြစ်ပါတယ်။
စရိုက် (မဟုတ်ရင် Microcontroller တွေကိုခေါ်) ကို controller ကို cache ကို data နဲ့ဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်များဖို့အသုံးပြု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Processor နဲ့ RAM ကိုတစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏနဲ့သေးသေးလေးကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ firmware ကိုသို့မဟုတ် BIOS ကို update လုပ်ပေးခြင်းများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလက်အောက်တွင်ရုံ Microcontroller တွေ၏ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ဖို့ရည်ညွှန်းသည်။ အလေ့အကျင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း flash ကို၏အသုံးအများဆုံးပျက်ကွက်မောင်း - ထို controller ကို၏ကျရှုံးခြင်း။
ဤအစိတ်အပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီသည်နှင့်တစ်ဦးအခြို့သောကြိမ်နှုန်း၏သဟဇာတတုန်ခါထုတ်လုပ်ထားတဲ့လင်းကျောက်တဲ့သေးငယ်တဲ့ကျောက်သလင်းဖြစ်ပါတယ်။ flash မှတ်ဉာဏ် devices များအတွက်တစ်ဦးပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဟာ Controller, Nande-memory နဲ့နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
တုတ်၏ဤအပိုငျးကိုလညျး Microcontroller တွေနှင့်အတူပြဿနာများမတူဘဲအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအန္တရာယ်ထိတွေ့နှင့်နေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီနေ့ရဲ့ drives တွေကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအတော်လေးရှားပါးပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ခေတ်သစ် flash drive ကိုအများစုသည်ဧည့်ခံခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်က USB 2.0 connector ကို type ကိုတစ်ဦး, တပ်ဆင်ထားသည်။ အများဆုံးသစ်ကို drives တွေကိုခုနှစ်တွင်ကို USB 3.0 အမျိုးအစားတစ်ဦးကိုသုံးပါနှင့် C. ရိုက်ထည့်
switch ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, LED ညွှန်ပြချက်များနှင့်အခြို့မော်ဒယ်များအချို့ features တွေဖို့တိကျတဲ့နေသောခေါင်းစဉ်: flash ကို-မှတ်ဉာဏ် devices များရဲ့အထက်ဖော်ပြပါအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများအပြင်, ထုတ်လုပ်သူမကြာခဏကဲ့သို့သော optional ကိုဒြပ်စင်နှင့်သူတို့ကိုပေး။
အတော်များများက flash ကို-drives တွေကိုသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အတော်လေးတောက်ပ LED မီးလည်းမရှိ။ ဒါဟာ flash ကိုလှုပ်ရှားမှု (အရေးအသားသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းဒေတာ) သို့မဟုတ်ရုံဒီဇိုင်းဒြပ်စင်ပြသဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီအညှနျးကိနျးအမြားဆုံးကိုမကြာခဏအရှိဆုံးချောင်းကိုနှင့်လိုအပ်ကြောင်းဘို့, တကယ်တော့, သာအသုံးပြုသူများ၏အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သို့မဟုတ်အလှအပအတှကျမဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းမပေးပါ။
အချိန်တိုင်းက USB သိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုတွေ့သော်လည်းဤသည်ဒြပ်စင်, အစား SD က-ကတ်များများအတွက်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောမကြာခဏအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုး၏သယ်ဆောင်အဖြစ်ကော်ပိုရိတ် enviroments မှာအသုံးပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏ရံဖန်ရံခါဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူမတော်တဆမှုရှောင်ရှားရန်, flash ပါတချို့မော်ဒယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်သူ switch ကိုအသုံးပြုသည်ကိုကာကွယ်ရန်မောင်း: ပါဝါသိုလှောင်မှု circuit ကိုချိတ်ဆက်သောအခါအရာ resistor သည်မှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်မှလျှပ်စစ်လက်ရှိရောက်ရှိမထားဘူး။
သင်ကာကွယ်မှု enabled ထားတဲ့အတွက် drive ကိုမှသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, operating system ကိုဒီမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
USB flash drive တွေကိုအချို့သည်သီးခြားဆော့ဖ်ဝဲမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသောလုံခြုံရေးလက်မှတ်များဆံ့ထားတဲ့: အလားတူပင်ကာကွယ်မှုဒါခေါ်ကို USB-keys ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ဒြပ်စင်လည်းတစ်ခုကံဆိုးအခြေအနေမှာရရှိလာတဲ့, ဖြိုဖျက်နိုင်သည် - တူသော device ကို functional ဖြစ်စေ, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသုံးစွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်မယ့်ပစ္စည်းရှိသေး၏။
Read more: တစ် flash drive ကိုပေါ်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လို
သူတို့အားပါဝင်သည်ဥပမာ, ရှေ့မှောက်တွင် Lightning connector စေရန်, microUSB သို့မဟုတ် Type-C: စမတ်ဖုန်းအပေါ်အပါအဝင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ရှိသူများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကပ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android, iOS ပေါ်စမတ်ဖုန်းတစ်ဦးက USB flash drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချက်အလက်များ၏အမြင့်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ drives တွေကိုရှိပါသည် - သူတို့ကကိန်းဂဏန်းတွေ password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ကီးဘုတ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အနှစ်သာရမှာတော့ overwrite လုပ်တဲ့ဆန့်ကျင်အထက်ဖော်ပြပါ switch ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏ဤကပိုအဆင့်မြင့်သောဗားရှင်း။
flash drive ကို၏အားသာချက်များ:
flash drive ကို၏အားနည်းချက်:
ဗို့အားအပွောငျးအလဲနှင့်ငြိမ် discharges မှအားနည်းချက်။
အနှစ်ချုပ်မှ - ကို flash-drive ကိုရှုမြင်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ point ကနေ, အစားရှုပ်ထွေး။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစိုင်အခဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အစိတျအပိုငျးမြား၏ချုံ့စက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုမှကြီးမားတဲ့ခုခံခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဒေတာများနှင့်အတူကပ်ပါကဗို့သို့မဟုတ်ငြိမ်လျှပ်စစ်မီးပြောင်းလဲမှုများများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပေသည်။